I-Wiko Y80: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni | I-Androidsis
UWiko luphawu olusebenzisa inani elikhulu leefowuni kwintengiso. Kulo nyaka sele besishiyile kunye neemodeli ezithile, ngakumbi phakathi kuluhlu oluphakathi, njenge View3. Utyikityo lngoku sungula inqanaba lakho elitsha lokungena, iWiko Y80. Sifumana ifowuni eza kunye neenkcukacha ezithile ezothusayo kweli candelo lentengiso.
Ukususela le Wiko Y80 ifika nekhamera ngasemva kabini, ukongeza ekubeni nebhetri enkulu, ethembisa ukuzimela okuhle. Ngokubanzi, inikezelwa njengemodeli yomdla omkhulu ngaphakathi kuluhlu lokungena lwe-Android. Kuba iza nexabiso elifanelekileyo lemali.
Uphawu lwesiFrentshi khange ithathe umngcipheko omninzi malunga noyilo. Sifumana uyilo oluqhelekileyo kolu luhlu. Akukho notshi kwiscreen sayo, kodwa iklasikhi yeklasikhi, enezakhelo ezibanzi eziphezulu neziphezulu. Nangona into eyothusayo kule meko bubungakanani besikrini, inkulu kuneyona siqhele ukuyibona kweli candelo.
1 Ukucaciswa kweWiko Y80
Ukucaciswa kweWiko Y80
Kwinqanaba lobuchwephesha, le Wiko Y80 idibana nezinto ezininzi esizibona kuluhlu olusezantsi. Nangona kwangaxeshanye, inkampani ifuna ukunika into entsha malunga noku. Njengoko babheja kwikhamera ephindwe kabini kwisixhobo, kunye nebhetri enkulu. Ke ithiwe thaca njengemodeli elungileyo kweli candelo. Oku kukucaciswa kwayo:
IsikriniI-IPS / LCD ene-5,99 intshi nge-HD + isisombululo
Inkqubo: Unisoc SC9863A
GPU: I-PowerVR IMG8322
Ukugcina ngaphakathi: I-16/32 GB (iyandiswa ngamakhadi e-MicroSD)
Cámara trasera: 13 + 2 MP ngeFlash ye-LED kunye neMowudi ye-AI
Ikhamera yangaphambiliI-5 MP ene-LED
Inkqubo yokusebenzaI-Android 9 Pie
abanye: 2D ukuvula ubuso
Ubukhulu: 160 x 76,5 x 8,6 mm
Kwiphepha eliphantsi kwi-Android, kuqhelekile ukuba iifowuni zingabinayo inzwa yeminwe. Nantsi into eyenzekayo ngale Wiko Y80, engenaso isivamvo somnwe, nangona endaweni yoko sifumana ukuvulwa ngokubonwa kobuso, okuqhubeka nokubakho kwezi fowuni zikwi-Android. Esi sixhobo siza ne-Android Pie ngokwasekhaya. Iindaba ezimnandi, kuba sinezindlela ezininzi zokulawula ibhetri ekuyo. Ke, baya kuba nakho ukuthatha ithuba le-4.000 mAh yesikhundla ngendlela engcono.
Kwelinye icala, i ubukho bekhamera ngasemva emibini kwifowuni. Ukubheja uphawu lwesiFrentshi ngokudityaniswa kwe-13 + 2 MP kule meko, ikwimo ye-AI. Ke uya kuba nakho ukubona ezinye zeempawu kwaye unike ukusebenza okungcono ngokubanzi kwezi khamera. Iilensi enye isetyenziselwa umphambili, kule meko i-5 MP. Iyamkeleka kwaye ixhaphakile kwisiphelo esisezantsi namhlanje. Kule nzwa sifumana ukuvulwa kobuso okukhankanywe ngasentla. Ikwavela ngokufika ngescreen se-intshi ye-5,99. Kuba inkulu kunokuba siqhele ukubona kuluhlu olusezantsi kwi-Android.
Ngekhe silinde ixesha elide ide ikhutshwe ngokusesikweni le Wiko Y80. Inkampani iqinisekisile ukuba kuphehlelelwa umnxeba izakuqhutywa nge-15 kaMeyi. Ke ukusukela ngoLwesithathu kuya kubakho ukuyithenga. Sifumana iinguqulelo ezimbini zesixhobo, ngokwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi.
Kwelinye icala sinenguqulo ene-2/16 GB, ethi isungulwe ngexabiso le-euro ezingama-119 ezivenkileni. Enye inguqulelo yefowuni, efika nge-2/32 GB, isungulwe ngexabiso le-129 euro. Umahluko omncinci kwixabiso phakathi kweenguqulelo ezimbini zesixhobo. Ukongeza, zombini ziyakuvumela ukuba wandise ologcino. Ngokubhekisele kwimibala, iya kuphehlelelwa ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye negolide. Kwi-Intanethi kukho ezinye iifoto ezinenguqulo kwithoni eluhlaza okwesibhakabhaka, kodwa ayikhangeleki ngathi iyinyani. Ucinga ntoni ngale Wiko Y80 ethi kraca isinika yona?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Wiko Y80: Uluhlu olutsha lokungena kunye neekhamera ezimbini